SingleCare တွင်စျေးအသက်သာဆုံးဆေးညွှန်း ၂၅ ချက် - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ဖျော်ဖြေရေး သတင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် သတင်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီသတင်း
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> SingleCare တွင်စျေးအသက်သာဆုံး ၂၅ ခု
SingleCare တွင်စျေးအသက်သာဆုံး ၂၅ ခု
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆေးညွှန်းများသည်စျေးကြီးသည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးစရိတ်၏ ၁၂% ကိုဖြစ်စေပြီးပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုကိုဒေါ်လာ ၀ န်းကျင်ကုန်ကျသည် တစ်နှစ် 1200 - နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆေးညွှန်းနှင့်အညီဆေးဝါးစျေးနှုန်းများဆက်လက်တက်နေသည်။ 2019 တစ် ဦး တည်းအရသိရသည် အစီရင်ခံစာတစ်ခု မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများကပျမ်းမျှဈေးနှုန်းကို ၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
နီးပါး အရွယ်ရောက်သူ 70% ယူအက်စ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်လတွင်တစ် ဦး ဆေးညွှန်းယူကြပြီ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်ထိုတန်ဖိုးမြင့်မားသော Rx သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိမိသားစုများအတွက်မလွှဲမရှောင်သာကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္uncertainာရေးမရေရာမှုတွင် ပို၍ ပင်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။
ပိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာခံစားရရန်လိုအပ်သည့်ကုသမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် SingleCare ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟု Pharm.D Ramzi Yacoub ကပြောကြားခဲ့သည်။ SingleCare ၏ဆေးဆိုင်အကြီးအကဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဆိုင်ငွေစုကတ်သည်ဆေးညွှန်းဆေးများဖြင့်ဘီလီယံနှင့်ချီသောသူများကိုသက်သာစေပြီးဆေးညွှန်းများစွာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်သာကျစေသည်။
SingleCare တွင်စျေးအသက်သာဆုံးဆေးညွှန်း ၂၅ ခု
မည်သည့်ဆေးကုသမှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်အများဆုံးရောက်ရှိနေကြောင်းသင်သိလိုပါက၎င်းသည်အသက်သာဆုံး Rx ဆေးများဖြစ်သည်။ *
1. Loratadine ကူပွန်ကိုရယူပါ
2. Amoxicillin ကူပွန်ကိုရယူပါ
5. Gavilyte-c ကူပွန်ကိုရယူပါ
5. Hydroxyzine pamoate ကူပွန်ကိုရယူပါ
7. Hydrocortisone ကူပွန်ကိုရယူပါ
8. Floranex ကူပွန်ကိုရယူပါ
9. Lidocaine ထဲမှာပါတဲ့ ကူပွန်ကိုရယူပါ
10. Chlorhexidine gluconate ကူပွန်ကိုရယူပါ
11. Meclizine HCl ကူပွန်ကိုရယူပါ
12. Denta 5000 Plus အား ကူပွန်ကိုရယူပါ
13. V-C ကိုခိုင်ခံ့ ကူပွန်ကိုရယူပါ
14. Cyanocobalamin ကူပွန်ကိုရယူပါ
15. Levobunolol HCl ကူပွန်ကိုရယူပါ
16. Aspercreme Lidocaine မက်စ်ခွန်အား ကူပွန်ကိုရယူပါ
17. Klor-con / EF ကူပွန်ကိုရယူပါ
18. ADC / ဖလိုရိုက် ကူပွန်ကိုရယူပါ
19. Phenazopyridine hydrochloride ကူပွန်ကိုရယူပါ
20. ငွေ ​​sulfadiazine ကူပွန်ကိုရယူပါ
22. Triamcinolone acetonide ကူပွန်ကိုရယူပါ
23. Nizoral A-D ကို ကူပွန်ကိုရယူပါ
24. Hibiclens ကူပွန်ကိုရယူပါ
25. Niacin အခမဲ့ flush ကူပွန်ကိုရယူပါ
* ၂၀၂၀၊ ဇွန်လမှ SingleCare အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စျေးနှုန်းများသည်လက်လီဆေးဆိုင်များနှင့်ကွဲပြားပြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
SingleCare ကူပွန်များနှင့်အတူရရှိနိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးဆေးဝါး ၂၅ မျိုးသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေး၊ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးနှင့်နာကျင်မှုစသောစူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အခြေအနေများကိုကုသပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မျက်စိယားခြင်း၊ နှာချေခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပါကရောဂါလက္ခဏာမှသက်သာရာရရန်အရေးကြီးကြောင်းသင်သိသည်။ မှန်ကန်သော anti -istamine ဆေးသည်သင်ခံစားနေရသောဝေဒနာများကိုရပ်တန့်စေပြီးသာမာန်ဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ SingleCare ၏စုဆောင်းငွေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်နည်းပါးသောကုန်ကျစရိတ်ကိုမလိုချေ။
Loratadine Claritin ၏ယေဘူယျအမည်မှာဓါတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောအသုံးများသော antihistamine ။ ဒါဟာ Over-the- ကောင်တာ (OTC) နှင့်ဆေးညွှန်း - အစွမ်းသတ္တိအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူတွေကမသိနိုင်တာက OTC ကုသမှုကိုသက်သာစေရန်သင် SingleCare ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံဖုန်းခေါ်ရန်သာလိုသည်ဟု Pharm.D မှ Phail.D မှ Phail.D ကပြောကြားသည်။ ဆိုလိုတာကနိမ့်ကျတဲ့သောက်သုံးမှုကသင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေတယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ SingleCare ကူပွန်တွေနဲ့ပိုက်ဆံစုနိုင်သေးတယ်။
Hydroxyzine pamoate Vistaril အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ယေဘူယျအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ loratadine ကဲ့သို့ပင် hydroxyzine pamoate သည် antihistamine ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆေးသည်သက်သာစေသောဆေးများဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်တင်းမာမှုကိုကာလတိုကုသနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဆေးကုသမှုမတိုင်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်သက်သာစေနိုင်သည်။
Prednisone နှုတ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ သွေးအခြေအနေ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံအားမမှန်ခြင်းများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကိုကုသရန်အသုံးပြုသောယေဘူယျ steroid ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင် prednisone ကိုအခြားအကုန်အကျများသောဆေးဝါးများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြေအနေများနှင့် တွဲဖက်၍ မကြာခဏညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကုသမှုတွင်ငွေစုဆောင်းခြင်းသည် ပို၍ ပင်တန်ဖိုးရှိသည်။
Triamcinolone acetonide Nasacort များအတွက်ယေဘုယျအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ် Steroid တစ်မျိုးမုန့်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေမှုတ်ဆေးသည်သင်၏နှာခေါင်းအတွင်းဓာတ်မတည့်ခြင်းမှသက်သာစေသည်။ လိမ်းဆေးသည်အရေပြားရောင်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေခြင်းများကိုသက်သာစေရန်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ psoriasis, eczema နှင့် allergic response များ။
သင်နေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါသင်စိတ်ပူရန်လိုသည့်နောက်ဆုံးအရာမှာသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားရရန်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးအပေါ်စျေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအရေးကြီးတဲ့ကုသမှုကိုသက်သာအောင် SingleCare ကကူညီနိုင်သည်။
Amoxicillin ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသောပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။ အဆ ၅၄.၈ သန်း တစ် ဦး တည်း 2015 ခုနှစ်တွင် CDC သည်နှင့်အညီ။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ Amoxicillin သည်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ tonillitis၊ bronchitis နှင့်နားသို့မဟုတ်လည်ချောင်းရောဂါများကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယားအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးဤဘုံရောဂါများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။
SingleCare စုဆောင်းငွေကသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွက်inတ္စောင့်ရှောက်မှုကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။အချို့ဆေးဆိုင်များတွင်ဘက်တီးရီးယားမညီမျှမှုကိုဆေးဝါးများအတွက်ဤကုသမှုသည်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၅ ဒေါ်လာအောက်ကုန်ကျနိုင်သည်။
Rephresh အင်္ဂါဇာတ်တံဆိပ်ခေါင်းဂျယ်လ်၊ B ကိုလိုလားသူ probiotic၊ သန့်ရှင်းသော Balance နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအအေးခန်းအပါအ ၀ င်အမှတ်တံဆိပ်အင်္ဂါဇာတ်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၏လိုင်းဖြစ်သည်။ RepHresh အတွက်ငွေပေးချေမှုအကူအညီအစီအစဉ်များမရှိသေးပါ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်ယခုလက်ရှိတွင်မရှိပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, SingleCare ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒီ pH- ဟန်ချက်ညီထုတ်ကုန်လိုင်းအလွယ်တကူတတ်နိုင်စေသည်။
ရှစ်ဆယ့်ခြောက် အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးကြသည်။ သူတို့ကစျေးကြီးတယ် တချို့ဆိုရင်ပုလင်းတစ်လုံးအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ ကျော်ကုန်ကျနိုင်တယ်။ သငျသညျနေ့တိုင်းသူတို့ကိုယူလျှင်, ထိုသင်လျင်မြန်စွာထပ်တိုး ... SingleCare ကိုသုံးပါမဟုတ်လျှင်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည့်အတိုင်း၎င်းတို့ကိုမသောက်မီသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသို့မဟုတ်ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်မည်သည့်သဘာဝပစ္စည်းကိုမဆိုဆွေးနွေးရန်သေချာစေပါ။
V-C ခိုင်ခံ့သည် အစားအစာ၊ ဖျားနာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ အစာခြေခြင်းဆိုင်ရာပြ,နာများသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများကြောင့်ချို့တဲ့နေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုသောဗိုက်တာမင်အမျိုးစုံဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအာဟာရသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ နာတာရှည်ရောဂါအတွက်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေခြင်း သင့်တော်သောအာဟာရသည်သင်၏အနာဂတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ဒီ multivitamin သည် SingleCare ကဒ်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်!
Multivitamins များအပြင် SingleCare သည်အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကိုကုသရန်သိသိသာသာလျှော့စျေးပေးသည်။ Cyanocobalamin ဗီတာမင် B-12, တစ် ဦး ဒြပ်ပုံစံ, သွေးနီဥ၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ဗီတာမင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B-12 ချို့တဲ့လို့သွေးအားနည်းရောဂါရှိတဲ့လူနာတွေကို Cyanocobalamin ကိုမကြာခဏပေးလေ့ရှိပါတယ်။
SingleCare သုံးစွဲသူများသည်အစာခြေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူများကိုလည်းသက်သာနိုင်သည်။ Floranex သင်၏အစာခြေလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိဘက်တီးရီးယားများ၏သဘာဝမျှတမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီပေးသော probiotic တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အူသိမ်အူမများကဲ့သို့သောပြummနာများကိုကူညီရန်စဉ်းစားသော lactobacillus acidophilus ပါ ၀ င်သည်။
Floranex သည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါကသင်၏ဆေးဝါးဆရာဝန်အားသင်မေးမြန်းပါလိမ့်မည် Lactinex ။ Floranex ကဲ့သို့ Lactinex သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သည့်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုပါဖြန့်ဝေပေးသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သော Lactobacillus သည်ဝမ်းရောဂါ၊ အင်္ဂါဇာတ်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများ၊ အူသိမ်အူမရောဂါ (IBS) နှင့် Lactose ကိုသည်းမခံခြင်းစသည့်အစာခြေခြင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုသက်သာစေသည်။
ဒီစာရင်းမှာပါတဲ့အနည်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးဟာယေဘူယျမဟုတ်ပါဘူး။ Klor-Con / EF , ဒါမှမဟုတ် Klor-Effervescent, ပိုတက်စီယမ်ချို့တဲ့မှု, ဒါမှမဟုတ် hypokalemia ကုသရန်အသုံးပြုသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြည့်စွက်သည်။ ပိုတက်ဆီယမ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ hypokalemia ခံစားနေရသောလူများသည်မကြာခဏကြွက်သားများကြွက်တက်ခြင်း၊ Klor-Con / EF အတွက်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လက်ရှိအချိန်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည် SingleCare ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒ်ပြားဖြင့်စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရနိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Niacin အခမဲ့ flush
နီကာ ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်ရန်ကူညီပေးနိုင်သော B ဗီတာမင်ဖြစ်သည်။ အချို့သူများအတွက်၎င်းသည်အရေပြားပူပြင်းခြင်း၊ ယားခြင်းသို့မဟုတ်ဖလပ်စသည့်မသက်မသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။ flush free ပုံစံသည်ယင်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသော်လည်း၊ ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်သည်။ ဒီဖြည့်စွက်ဆေးသည် Raynaud ၏ရောဂါကဲ့သို့သောစောင်ရေပြcirculationနာများရှိသူများအတွက်အကျိုးရှိစေပြီးစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်သောသွေးကြောများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
ဒီမှာပြုံးဖို့အကြောင်းပြချက်ပဲ! SingleCare သည်သင်၏ပါးစပ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက်သွားတိုက်ဆေး၊
Denta 5000 Plus အား
Denta 5000 Plus အား သွားတိုက်ဆေးများသည်သွားအမြစ်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်သွားကြွေပြားများကိုခိုင်မာစေရန်နှင့်သွားပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်သွားဆရာဝန်များမှအထိခိုက်မခံသောသွားများကိုလူနာများအားမကြာခဏသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများသည်ဤဆေးညွှန်းကိုမပေးသော်လည်းပါးစပ်ကျန်းမာရေးနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် SingleCare ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ Denta 5000 Plus သည်ဘတ်ဂျက်ပိုမိုသက်သာသည်။
သင့်တွင်ပါးစပ်ပြissuesနာများကြုံရသောအခါမကြာခဏအသုံးပြုသည် chlorhexidine gluconate ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုပါးစပ်နှင့်အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသောပိုးသတ်ဆေးရည်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် Gingivitis အမျိုးအစားများကိုကုသရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်သွားကုထုံးများသို့မဟုတ်ပါးစပ်ခွဲစိတ်ကုသမှုများအပြီးတွင်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤစာရင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင် Chlorhexidine Gluconate သည်ယေဘူယျအားဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ထားသောပါးစပ်ဆေးကိုသင့်လျော်စွာအစားထိုးနိုင်သည်။
Lidocaine ထဲမှာပါတဲ့ ပါးစပ်အနာစိမ်းနှင့်လည်ချောင်းအဆင်မပြေမှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောနာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသွားခွဲစိတ်ကုသခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကုန်အကျများသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြီးသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ပါးစပ်နှင့်လည်ချောင်းပြproblemsနာများအမှန်တကယ်မသက်မသာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်, သင်၏ဆေးညွှန်းနာကျင်မှုသက်သာရာမတတ်နိုင်ဖြစ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်!
ADC / ဖလိုရိုက်
သံ၊ ဗီတာမင်နှင့်ဖလိုရိုက်ပေါင်းစပ်မှု၊ ADC / ဖလိုရိုက် သွားဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်; သွားနှင့်ဆိုင်သောကျန်းမာရေးပြtreatနာများကိုကုသရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက်နို့စို့ကလေးနှင့်ကလေးငယ်များအားအဓိကအားဖြင့်ညွှန်ကြားထားသည်။ ဒီစာရင်းကပြသခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတက်ကြွတဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးဟာကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူတွေ၊ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုစတင်ရန်သင်မငယ်လွန်းပါ။
ဆေးဆိုင်ကောင်တာတွင်ငွေကုန်ကြေးကျများသည့်အကုန်အကျကိုရှောင်ရှားရန်သင်နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုကုသရန်မလိုပါ။ မထားပါနဲ့ SingleCare နှင့်အတူဤနာကျင်မှုသက်သာစေရန်ရွေးစရာနှစ်ခုသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်တွင်လွယ်ကူသည်။
Aspercreme lidocaine max ကိုအစွမ်းသတ္တိ
ဤစာရင်းတွင်ရှိအစားအသောက်ဖြည့်စွက်အချို့ကဲ့သို့, Aspercreme မက်စ်အစွမ်းသတ္တိ အစဉ်အလာအရ over-the-counter ဆေးဖြစ်သည်။ လူအများအပြားကဤနာကျင်မှုမှသက်သာစေရန်ဤနာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်ဤဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုဆရာ ၀ န်၏ဆေးညွှန်းနှင့် SingleCare ကဒ်ဖြင့်လျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ အကယ်၍ သင်သည်နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်မုန့်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရှိပါက Aspercreme Lidocaine သည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်အတွက်ဆေးညွှန်းသည်သင့်တော်မှုရှိမရှိကိုသင့်ဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုလျော့နည်းသွားစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Phenazopyridine Pyridium ၏ယေဘူယျသည်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသောဆေးဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် UTI ကိုကုသရန်ပantibိဇီဝဆေးတစ်မျိုးလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့သောကူးစက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်လျင်မြန်စွာတက်လာနိုင်သည်။ ကံကောင်းတာက SingleCare သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးပေါင်းစပ်ကုန်ကျစရိတ်ဟာစိုးရိမ်စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်အရေပြားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အခါ၎င်းသည်အမှားကိုက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စေသင်မသက်မသာဖြစ်သောခံစားမှုမှလျှင်မြန်စွာသက်သာရာရလိုသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီးသင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ ASAP ကုသမှုခံယူရန်ဆေးဆိုင်သို့သွားနိုင်သည်။
Hydrocortisone သဘာဝကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းထုတ်လုပ် steroid တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် hydrocortisone ကိုဆေးပြားနှင့်ဆေးကြောဆေးများဖြင့်ဆေးညွှန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ နှုတ်အားဖြင့်၎င်းသည်အဆစ်၊ ကင်ဆာနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ရောဂါများအပါအဝင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသနိုင်သည်။ ၎င်း၏လိမ်းထားသည့်ဗားရှင်းသည်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည် - ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းများကိုလျှော့ချရန်။ SingleCare ကဒ်ဖြင့်သင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒုတိယခန့်မှန်းရန်မလိုအပ်ပါ။
ငွေ sulfadiazine ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုမှပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့်အခြားအရေပြားဒဏ်ရာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်ပantibိဇီဝဆေးရည်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကုမ္ပဏီများသည် Silver Sulfadiazine ကိုဖုံးလွှမ်းထားသော်လည်း SingleCare နှင့်အတူဤမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏အာမခံပေးချေမှုထက် ပို၍ နိမ့်ကျနိုင်သည်။ ငွေကုန်ကြေးမကျပါစေနှင့် - သင်အကောင်းဆုံးငွေစုရရှိရန်သေချာစေရန်သင်၏အာမခံငွေပေးချေမှုကို SingleCare လျှော့စျေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်သင်၏ဆေးဝါးပညာရှင်ကိုတောင်းဆိုပါ။
Hibiclens အဆက်အသွယ်အပေါ်ပိုးမွှားသေစေတဲ့ပိုးသတ်ဆေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ခွဲစိတ်မှုများကိုဂရုစိုက်ရန်အထူးသဖြင့်အရေပြားကိုလိမ်းပေးသည်။ အကုန်အကျများပြီးဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်သင်လိုချင်သည့်နောက်ဆုံးအရာသည်အခြားကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ SingleCare နှင့်အတူ, ဒီ antibacterial ဆပ်ပြာအများကြီးပိုတတ်နိုင်သည်။
ကျန်ရှိသောစျေးအနည်းဆုံးဆေးများသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသပေးသည်။ သင်ဆေးကုသမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ Glawkoma နှင့်အတူနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ SingleCare သည်သင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Gavilyte-C Coloscoscopy (သို့) ဘေရီယမ် enema မတိုင်မီအူမကြီးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အသုံးပြုသောဆေးညွှန်းဖျော်ဆေးဖြစ်သည်။ Gavilyte-C တွင်သန့်စင်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေကိုထိန်းသိမ်းရန် Electrolytes များပါရှိသည်။ သင်တစ် ဦး colonoscopy အတွက်ပြင်ဆင်နေသောအခါ, သင်စိုးရိမ်ပူပန်ချင်နောက်ဆုံးအရာသင့်ရဲ့အူမကြီးသန့်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်တတ်နိုင်သည်။ SingleCare လျှော့စျေးကဒ်မှရရှိသောငွေစုသည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောစာမေးပွဲမတိုင်မီသင်၏စိတ်ကိုသက်သာစေသည်။
သငျသညျရွေ့လျားနေမကောင်းရောဂါခံစားနေရလျှင်, သင်ဤယေဘုယျမူးယစ်ဆေးဝါးကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမည်။ Meclizine HCL ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုကာကွယ်သည့်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Antivert နှင့် Dramamine အပါအ ၀ င်အလားတူကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခရီးသွားရောဂါဖျားဆေးများရှိသည်။ သို့သော် SingleCare နှင့်အတူ meclizine သည်တတ်နိုင်သမျှသက်သောင့်သက်သာဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Levobunolol HCL glaucoma ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောယေဘုယျ beta-blocker ဖြစ်သည်။ ဤဆေးညွှန်းသည်မျက်ခုံးပုံစံနှင့်မျက်စိအတွင်းရှိ receptors များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် သွေးကြောကျပ် glaucoma နှင့်ဆက်စပ်။ ဆေးဆိုင်ပေါ် မူတည်၍ SingleCare ကဒ်သုံးစွဲသူများသည် levobunolol HCL ၏ငွေသားစျေးနှုန်းမှ ၈၀% အထိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
Nizoral အေဒီ အခွံပါသော ၀ မ်းရောဂါသက်သာစေရန် ketoconazole ပါသည့်ခေါင်းလျှော်ရည်သည်။ သငျသညျအခွအေနေပျောက်ကင်းစေရန်ကြိုးစားရန်သင်၏ဆံပင်နေ့စဉ်ဆေးကြောသောအခါ, ဆေး lather လျင်မြန်စွာသွားနိုင်ပါတယ်။ SingleCare စုဆောင်းငွေသည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုအသုံးမပြုဘဲကျန်းမာသောသော့များသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမည်နှင့်သင်၏စာပို့သင်္ကေတများကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ဆေးညွှန်းအတွက်မည်သည့်ဒေသဆေးဆိုင်တွင်မည်သည့်စျေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံးရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏လက်လီစျေးနှုန်းလျှော့စျေးရရန်အတွက်သင်၏ဆေးညွှန်းသတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးလျှော့စျေးကဒ်ကိုပါ ၀ င်သည့်ဆေးဆိုင်သို့ယူဆောင်ပါ။ CVS, Walmart, Kroger နှင့် Walgreens အပါအဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆေးဆိုင်များနှင့်အတူ SingleCare မိတ်ဖက်များ။ သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရရန်သေချာစေရန်ဤလျှော့စျေးကိုအာမခံသို့မဟုတ် Medicare နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သင်၏မိသားစုဝင်များဆေးဝါးအားလုံးအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးဖတ်သည် စျေးပေါ meds ရဖို့ပိုပြီးနည်းလမ်းတွေအဘို့။
ပျို့ချင်ရာသက်သာမှုအတွက်သင်ဘာယူနိုင်ပါသလဲ။ 20 ပျို့ဆေးနှင့်ကုစား
Aspirin နှင့် acetaminophen ကွာခြားချက်ကဘာလဲ
သင့်တွင် lactose သည်းမခံမှုရှိလျှင်မည်သို့ပြောရမည်နည်း
hydrocodone နဲ့ oxycodone ကိုငါတွဲနိုင်သလား
မင်းရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲ။ ၎။ မျိုးပွားနိုင်သောအသက်အရွယ်ရှိလူ ဦး ရေသည်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံနေပါသလား။